Ama-Best Ethereum Brokers Novemba 2021 | Umhlahlandlela Wokugcina ku-Top Ethereum Brokers!
Unentshisekelo ekuhwebeni u-Ethereum futhi ufuna abathengisi abahamba phambili kuleyo nhloso? I-intanethi igcwele abathengisi abaningi ababala u-Ethereum njengenye yezimakethe ongazihweba.
Lapho ukhetha umthengisi, ukucatshangelwa okubalulekile kufanele kubandakanye umthethonqubo, ukwakheka kwemali, izimakethe ezisekelwayo, nezinye izinto eziningi ezizocatshangelwa kulo mhlahlandlela. Ukukusiza wenze ukukhetha okulungile, leli khasi lizoxoxa ngabathengisi abahamba phambili be-Ethereum emakethe njengamanje.
Abathengisi Abakhulu Base-Ethereum Emakethe - Ukubuka Okusheshayo
eToro - Sekukonke i-Best Ethereum Broker
Capital.com - 0% broker wekhomishini yokuhweba Ethereum
I-AvaTrade - Othembekile Ethereum Broker Wokuhlaziywa Kwezobuchwepheshe
Ama-67% ama-akhawunti wabatshalizimali athengisa imali alahlekelwa yimali lapho kuthengiswa ama-CFD ngalo mhlinzeki.
Abathengisi Abakhulu Base-Ethereum Emakethe Babuyekeziwe
Uma unentshisekelo yokuhweba i-Ethereum, kubalulekile ukwazi abathengisi abahle kakhulu ongakwenza nabo lokhu. Eminye yemigomo okufanele ibhekwe ifaka phakathi idumela, izindlela zokukhokha, ukwehluka kwezimakethe, ukusetshenziswa okulula, nokuningi. Sihlolisise inqwaba yamapulatifomu ahlukahlukene ngokuya ngala ma-metric. Ngakho-ke, uma ufuna ukuhweba i-Ethereum, ungahle uthande ukucubungula abadayisi abalandelayo.
1. eToro - Sekukonke i-Ethereum Broker
I-eToro ingomunye wabathengisi abahamba phambili be-Ethereum emakethe - hhayi okungenani ngoba ine-interface yomsebenzisi elula eyenza ukuhweba kube lula kwabaqalayo nabathengisi abanolwazi ngokufanayo. Uma uthengisa u-Ethereum kulo broker osakazeka kuphela, awudingi ukukhokha amakhomishini ajwayelekile ongawathola kwamanye amapulatifomu wokuhweba. Esikhundleni salokho, umane udinga ukwenza okwanele ukumboza ukusabalala okuza ngokuvula nokuvala izikhundla zakho ze-Ethereum.
Ngaphezu kwalokho, i-eToro ikunikeza ithuluzi lokuhweba ngekhophi ongalisebenzisa ukuze uqale kumthengisi ngaphandle kolwazi lokutshala imali. Ukusebenzisa leli thuluzi kusho ukuthi uzokopisha izikhundla ezivulekile zomthengisi we-Ethereum ophumelelayo. Uzonquma inani ohlose ukulibeka ngemuva komthengisi - eliqala okungenani ku- $ 500. Ukwenza lokhu kube lula, i-eToro ikunikeza ngezinsiza zokuhlunga ukuqinisekisa ukuthi ukhetha umtshali zimali ofanele. Empeleni, ngaleli thuluzi, ungaqala ukuhweba i-Ethereum ngokungenzi lutho noma usaqala.
Ngokwengeziwe, i-eToro ikuvumela ukuthi uqalise ngokuhweba nge-Ethereum ngendlela engabizi. Umane udinga ukwenza idiphozi encane edingekayo engu- $ 200. Ukulandela lokho, ungaqala ukuhweba i-Ethereum ngemali encane njengama- $ 25 ngesiteki ngasinye. Uma kukhulunywa ngokufaka imali, ungakwenza lokho ngezindlela ezahlukahlukene zokukhokha ezixhaswayo kufaka phakathi amakhadi wedebithi / wesikweletu, ama-e-wallets, nokudluliswa kwamabhange. Mayelana nezimakethe ongahweba ngazo ku-eToro, unezinhlobo ezahlukahlukene zezinketho ngaphandle kwe-Ethereum.
Izimakethe ezisekelwayo zimboza amaphrojekthi amancanyana namakhulu, amanye awo afaka iBitcoin, iCardano, iRipple, iLitecoin, nokuningi. Ngaphandle kokukwazi ukuhweba zonke lezi zimakethe ngokusakazwa kuphela, ukufinyelela kulezi zimpahla kusho ukuthi ungahlukanisa ukuhweba kwakho ukuze wandise iphothifoliyo yakho kalula.
Ekugcineni, i-eToro ngumthengisi oza nesikhwama esakhelwe ngaphakathi. Ukuba usizo kwalokhu kuyabonakala lapho uthenga amathokheni wangempela e-Ethereum futhi udinga ukugcina izinhlamvu zakho zemali. Usebenzisa isikhwama esakhelwe ngaphakathi, lo broker akugcinela inkathazo yokuhambisa amathokheni akho asuka kwelinye ipulatifomu aye kwelinye. Inqubo enjalo ingaxaka amathokheni akho nezikhiye eziyimfihlo. Ngendlela efanayo, lapho ufuna ukukhipha amathokheni akho e-Ethereum, ungakwenza lokho ku-eToro ngokumane ubeke i-oda lokuthengisa.
I-Trade Ethereum ngesisekelo sokusabalala kuphela
Ilawulwa yi-FCA, i-CySEC, ne-ASIC - nayo ivunyelwe e-US
Ipulatifomu esebenziseka kalula nesigxobo esincane se-crypto esingu- $ 25 nje
Imali engu- $ 5 yokukhipha
Ama-67% wabatshalizimali abathengisayo balahlekelwa yimali lapho bethengisa ama-CFD nalo mhlinzeki
2.Capital.com - 0% Commission Broker Yokuhweba Ethereum
Kwesinye isikhathi lapho uhweba i-Ethereum, ungahle usebenze ngecebo lesikhashana. Kuleso simo, umthengisi onjengoCapital.com uza kahle - njengoba ipulatifomu yokuhweba ikuvumela ukuthi uthenge futhi uthengise izinsimbi zeCFD. Lokhu kusho ukuthi esikhundleni sokuthatha ubunikazi bangempela be-Ethereum, umane uvule izikhundla zakho ngokususelwa kunani lethokheni. Usebenzisa ama-CFD akunikeza ukufinyelela ezakhiweni zokuphakamisa nokuthengisa okufishane, okuyizindlela zokwandisa ukuhweba kwakho kwe-Ethereum.
Ngaphezu kwalokho, iCapital.com futhi ikwazile ukufeza izinga elithile lokuthembeka emakethe ngoba ipulatifomu ilawulwa. Lapho uhweba nge-Ethereum nomthengisi olawulwayo onjenge-Capital.com, ungaqiniseka ukuthi izimali zakho zizohlala ziphephile ngaso sonke isikhathi. I-broker ilawulwa yiziphathimandla ezihola phambili zezezimali kubandakanya ne-FCA, okusho ukuthi ipulatifomu ihlolwa njalo ukuqinisekisa ubulungiswa kanye nokwenza izinto obala ekusebenzeni kwayo.
Njengomthengisi we-0% u-Ethereum broker, iCapital.com kufanele ibe kuhlu lwakho lwamapulatifomu aphezulu okuhweba okufanele uwacabangele. Ukungakhokhi amakhomishini kusho ukuthi ukhululekile kulezo zimali eze ngokuvulwa kokuhweba kwe-Ethereum. Ngalo broker, udinga kuphela ukwenza inzuzo eyanele ukumboza igebe phakathi kwebhidi ka-Ethereum nentengo yokubuza. Ngaleyo ndlela, ungakhulisa ukuhweba kwakho futhi uthole inzuzo ngaphandle kokulahlekelwa yiningi lazo kwizimali ezahlukahlukene.
Ngokwengeziwe, inzuzo ebalulekile yokusebenzisa iCapital.com ukuthi uthola ukufinyelela ezimakethe ezingaphezu kwe-200 ze-cryptocurrency - kufaka phakathi i-Ethereum. Ngakho-ke, uma ungumuntu othanda ukuhweba amathokheni amakhulu amakhulu njenge-Ethereum, ngenkathi uvula ezinye izikhundla ezimakethe ezincane zama-cap, lo broker uyisinqumo esifanele kuwe. NgeCapital.com, hhayi kuphela lapho ungathengisa ngababili abadumile be-fiat namabhangqa we-crypto-cross, kepha futhi namathokheni amaningi we-Defi.
Okokugcina, ku-Capital.com, ukuze uqale ngohambo lwakho lokuhweba nge-Ethereum, udinga kuphela ukufaka inani eliphansi lama- $ 20, okuyisici esihle uma usesabelomali. Kodwa-ke, uma ungeza imali ku-akhawunti yakho ngokudluliswa kwebhange, idiphozi encane okudingeka uyenze yi- $ 250. Ngakho-ke, kufanele wazi ukuthi iCapital.com isekela izindlela ezahlukahlukene zokukhokha kufaka phakathi amakhadi wedebithi / wesikweletu, ama-e-wallets nokudluliswa okuvamile kwebhange.
Umthengisi osebenziseka kalula wokuhweba i-Ethereum
Ama-71.2% wabatshalizimali abathengisayo balahlekelwa yimali lapho bethengisa ama-CFD nalo mhlinzeki
3.I-AvaTrade - I-Credible Ethereum Broker Yokuhlaziywa Kwezobuchwepheshe
I-AvaTrade ingomunye wabathengisi abahamba phambili be-Ethereum, hhayi okungenani ngoba ipulatifomu ilawulwa ezindaweni eziyisi-7 futhi ibhekelwa njalo ukuhambisana. Umthengisi futhi wenza ukuhweba kwe-Ethereum ngokushesha, okuyinzuzo enkulu uma uhlose ukuvula izikhundla eziningana. Ngokwengeziwe, umthengisi ukukunikeza amazinga wokuphana wokuphana wokuhweba i-Ethereum, okuyindlela ephumelelayo yokwandisa ukubuyisa kwakho.
Okubaluleke nakakhulu, i-AvaTrade ikunikeza ngamathuluzi wokuhlaziya ezobuchwepheshe afanele ekwenzeni ukuhweba nge-smart Ethereum. Umthengiseli ukukunikeza amashadi nezinkomba zobuchwepheshe ezithuthukile ongazisebenzisa ukuqonda kangcono imakethe. Lawa mathuluzi avinjelwa kakhulu abadayisi abanolwazi lwe-Ethereum ukunquma ukuthi bavule nini futhi bavale izikhundla zabo. Ukufunda ukuthi uzisebenzisa kanjani kuzokusiza futhi ukuthi uzulazule ngqo ezimakethe ze-Ethereum.
Kuyathakazelisa ukuthi i-AvaTrade ikuvumela ukuthi uqale ukuhweba i-Ethereum nge-akhawunti yedemo. Le yi-akhawunti ongayisebenzisa ukuhweba i-Ethereum ngaphandle kokuthatha izingozi zangempela eziza nezimakethe zangempela. Lokhu kuzokunikeza isikhathi esanele sokuzijwayeza imakethe ye-Ethereum futhi unqume izindlela eziphumelela kakhulu zokuhweba ngempahla. Ipulatifomu isekela izimakethe eziningi ze-crypto, lapho ungaqhubeka khona nokuhweba i-Ethereum ngokuqhathanisa nezinye izimpahla zedijithali noma imali ye-fiat efana ne-USD, EUR, JPY.
Umdayiseli naye uyakuvumela ukuthi usethe ifayela le- ukuyeka-ukulahlekelwa ukuhleleka. Leli oda likuvumela ukuthi ufundise umdayiseli ukuthi avale ukuhweba kwakho kwe-Ethereum uma ukulahlekelwa kwakho sekufike entengo ethile. Isibonelo, ungasetha ukulahleka kwakho kokuma ngo-10% wentengo yakho yokungena emakethe. Uma kunjalo, uma intengo yakho yokungena ingu- $ 2,000, i-AvaTrade izovala umsebenzi wakho uma imakethe ihamba ngendlela engemihle futhi ifinyelela ku- $ 1,800. Ukubaluleka kwalesi sici ukuthi kukusiza ukunciphisa ukulahlekelwa kwakho ngaphambi kwesikhathi.
Okokugcina, uma usufake idiphozi ubuncane be- $ 100 ku-AvaTrade, ungaqala ngohambo lwakho lokuhweba lwe-Ethereum. Lokhu kungenziwa nganoma yiziphi izindlela zokukhokha ezisekelwayo kufaka phakathi amakhadi wedebithi / wesikweletu, ama-e-wallets nokudluliswa kocingo. Ngaphezulu kokuba ngumthengisi osakazeka kuphela, awukhokhi mali kuma-deposit nokukhipha imali, okwenza leplatifomu ibe inketho engabizi kakhulu. Futhi, umthengisi usebenza ama-akhawunti ahlukanisiwe, okusho ukuthi imali yakho ithokozela ukuvikelwa ngaso sonke isikhathi.
I-akhawunti yedemo yamahhala yokwenza ukuhweba kwe-Ethereum
Ukukhetha abathengisi abahle kakhulu be-Ethereum
Uma ufuna iyiphi broker ongathengisa ngayo ne-Ethereum, uzothola abaningi online. Kodwa-ke, uma ufuna i- best Ama-Ethereum broker phakathi kwalezi zinketho, kufanele ucabangele izici ezithile. Ezinye zalezi zinto zibandakanya ukusebenza kahle kwezindleko, izimakethe ezibalwe, ukusetshenziswa okulula, izindlela zokukhokha, nokuningi.
Uma ungaqondi ukuthi yini eyenza umthengisi omkhulu, ungahle ube nepulatifomu engafanele, ezoba nemiphumela emibi kulwazi lwakho lokuhweba. Ngakho-ke, kulesi sigaba, sizohlinzeka ngencazelo ebanzi yazo zonke izinto okudingeka uzicabangele lapho ukhetha umthengisi we-Ethereum ongcono kakhulu ngezidingo zakho.
Ukuthembeka kungesinye sezizathu ezibalulekile zokukhetha umthengisi olawulwayo. Lokhu kungenxa yokuthi ama-broker alawulwayo avame ukucwaningwa yizikhungo ezihola phambili zezezimali njenge-FCA. Lokhu kunjalo nge-eToro neCapital.com, abadayisi ababili abalawulayo abahamba phambili abakuvumela ukuthi uhwebe i-Ethereum ngaphandle komthungo.
Ukuhweba i-Ethereum nomthengisi onelayisensi kusho ukuthi uphakathi kwenetha lokuphepha lomlawuli.
Abathengisi abathathu ongabasebenzisa lapha bafaka i-eToro, iCapital.com, ne-AvaTrade. Lokhu kungenxa yokuthi laba bahlinzeki banamalayisense yimigwamanda yezezimali enedumela elihle. Lokhu kusho ukuthi izimali zakho zijabulela ukuvikeleka okwenele ngaso sonke isikhathi.
Abashintshi abalawulwayo banikwe igunya lokuqinisekisa ukuthi imali yakho igcinwa kwi-akhawunti yasebhange ehlukile kuleyo yomhlinzeki. Lokhu kuqinisekisa ukuthi noma ikuphi ukuyekethisa okuthinta izimali zomhlinzeki ngeke kuchitheke kumali yakho.
Ngokwengeziwe, laba bahwebi be-Ethereum abalawulwayo kuzofanele baqinisekise ukwakheka kwemali yabo nezimo zokuhweba zisobala. Isibonelo, azikho izimali ezifihliwe nge-eToro, Capital.com, ne-AvaTrade. Lezi ngezinye zezizathu zokuthi kungani kufanele ukhethe umdayiseli olawulwayo.
Yize ukuhweba ngamapulatifomu wokuhweba angalawulwa kungakunika ukufinyelela esakhiweni semali ephansi kakhulu noma kukuvumele ukuthi usebenze ngokungaziwa, lezi zici ezibonakala ziheha ziza ngokuvikeleka. Ngakho-ke, uma ungafuni ukubeka imali oyisebenzele kanzima engcupheni, khetha umthengisi olawulwayo wokuhweba u-Ethereum.
Imali kanye namakhomishini ngezinye zezindlela abathengisi abenza ngazo inzuzo ngokukuvumela ukuthi uhwebe i-Ethereum. Ngakho-ke, abathengisi abahlukahlukene banezinqubomgomo ezahlukahlukene maqondana nesakhiwo sabo sentengo. Lokhu kusho ukuthi ngenkathi abanye abathengisi benemodeli ekhokhisa kakhulu, kukhona nabanikezeli abangenayo ikhomishini.
Isibonelo, ngeke uthole imali ekhokhwayo yekhomishini uma usebenzisa i-eToro ngoba umhlinzeki kungumthengisi wokusabalalisa kuphela. Ngendlela efanayo, iCapital.com ikuvumela ukuthi uhwebe i-Ethereum ngaphandle kokukhokha i-dime kukhomishini.
Ngakho-ke, ungakwazi ukwenza inzuzo ngokulula ngokuhweba kwakho kwe-Ethereum lapho usebenzisa i-broker ephansi yalolu hlobo. Kungakho kufanele unake ngokucophelela isakhiwo semali yomthengisi ngaphambi kokwenza ukukhetha.
Ake sicabange ukuthi ukhetha umthengisi lapho ukhokha khona amakhomishini wokuhweba u-Ethereum.
Ake sithi umthengisi ukhokhise inani elinqunyiwe. Ngakho-ke, uma ufaka u- $ 1,000 ku-Ethereum futhi ikhomishini engaguquki ingu-2%, lokho kuzoba yi- $ 20 lapho uvula ukuhweba kwakho.
Ngokufanayo, ipulatifomu izokukhokhisa ngesilinganiso esifanayo lapho uvala ukuhweba kwakho kwe-Ethereum. Ngakho-ke, uma uvala isikhundla sakho ku- $ 1,200, lokho kuzolingana ne- $ 24.
Lokhu kusho ukuthi uzokhokha isamba esingu- $ 44 kulolohwebo lwe-Ethereum. Noma lokhu kubonakala kukuncane kuwe, cabanga ngomphumela wokuqoqwa kwalezi zimali kuzoba nayo yonke imisebenzi yakho, ikakhulukazi uma ucabanga ukuthi ngeke uhlale wenza inzuzo ngaso sonke isikhathi. Ngakho-ke, khetha abathengisi ababiza imali nabasabalalayo abenza ukuhweba i-Ethereum kungabi namthungo futhi kube nenzuzo ethe xaxa.
Kubathengisi abasabalalisa kuphela abanjengo-eToro, lapho uvula ukuhweba kwe-Ethereum, uzobe ungena emakethe ngokulahlekelwa okuzenzakalelayo. Lokho kulahleka kubonisa umehluko phakathi kwentengo ethi 'buza' kanye 'nebhidi' ecashunwe ku-Ethereum.
Uma i-ETH / USD inenani 'lokucela' lama- $ 3,900.
Intengo 'yebhidi' yalaba bobabili ingaba ngama- $ 4,100
Uma kunjalo, ukusabalala kuku-5.1%
Ngakho-ke, ukuze wenze inzuzo lapha, izimbuyiselo zakho kufanele zifake igebe elingu-5.1% eselivele lenziwe kwezohwebo.
Ezinye Izimali Okufanele Uzazi Ngazo
Lezi ezinye zezimali zokuhweba okufanele wazi ngazo. Yize kungebona bonke abathengisi bakwa-Ethereum abakhokhisa lezi zimali, ukwazi ngazo kukunikeza umbono wokuthi yini ongayilindela.
Imali ekhishwa ebusuku: Lezi zikhokhiswa uma usebenzisa ama-CFD futhi ugcina indawo yakho ivulekile isikhathi esingaphezu kosuku. Uma kunjalo, imali ekhishwa ngobusuku bonke izokhokhwa nsuku zonke isikhundla sivulekile. Isibonelo, uma uhweba ngosuku i-Ethereum, le yimali ongayikhokha.
Imali Yokungasebenzi: Abadayisi balindele ukuthi ube ne-akhawunti esebenzayo. Ngakho-ke, uma ungathengisi ngenkuthalo, ungahle uthole imali ekhokhelwa ukusebenza nyangazonke ezokhokhiswa inqobo nje uma unemali ku-akhawunti yakho.
I-Ethereum yezohwebo esetshenziswayo
Kubalulekile ukuthi ucabangele ukuthi umdayiseli wakho uyakuvumela yini ukuthi uhwebe i-Ethereum ngamandla. I-Asides evela ku-Ethereum, ungahle ufune ukuqinisekisa ukuthi ukutholakala kuyatholakala kuzo zonke izimakethe ze-cryptocurrency ezisohlwini uma kwenzeka ufuna ukuhlukanisa imisebenzi yakho.
Ukusetshenziswa kuyindlela ephumelelayo yokwandisa ukubuyisa kwakho. Ngalesi sici, ungafaka ukuhweba noma ungenayo imali edingekayo. Umane nje udinga ukufaka amandla okususelwa kwimali onayo futhi umthengisi uzokuboleka okusele.
Isibonelo, ake sithi ufuna ukubeka i-oda lokuthenga elingu- $ 2,000 ku-Ethereum, kepha une- $ 200 kuphela ku-akhawunti yakho yokuhweba.
Lapha, amandla we-1: 10 yikho konke okudingayo. Usebenzisa lesi silinganiso kusho ukuthi ungabeka i $ 200 ku-Ethereum ngenkathi uthola enye kumthengisi wakho.
Ngakho-ke, uma wenza inzuzo engama-20% ekuhwebeni, lokhu kuzobalwa ngokususelwa endaweni yakho ephelele, eyi- $ 2,000. Ngakho-ke, lokho kuzoba yi- $ 400.
Kodwa-ke, ukube awusebenzisanga inzuzo, ngabe wafaka ama- $ 200 kanti inzuzo engama-20% ngabe ifinyelela ku- $ 40 nje.
Ngokuphawulekayo, kufanele wazi ukuthi ukusebenzisa amandla wokusebenzisa amandla nakho kuyingozi. Ngenkathi ingakhuphula ukuhweba kwakho, ingakhulisa nokulahlekelwa kwakho. Ngakho-ke, ngaphambi kokuhweba nge-Ethereum ngalesi sici, funda ukuthi ungazivimba kanjani izingozi zakho ngempumelelo.
Abathengisi abanolwazi bavame ukuthengisa okufishane u-Ethereum ukuze benze inzuzo. Lokhu kuvamile kubathengisi abangochwepheshe ngoba ukuthengisa okufishane kudinga ulwazi oluthile. Ikakhulu, kufanele ukwazi ukufunda amashadi futhi usebenzise izinkomba zobuchwepheshe.
Uma uthengisa okufishane, uphikisana nomqondo ovamile wokuthenga i-Ethereum ngentengo ephansi bese uthengisa imali ngemuva kokuthi inani likhuphuke.
Esikhundleni salokho, uthengisa u-Ethereum lapho i-crypto pair inenani eliphakeme futhi ifuna ukuthenga impahla lapho inani lehla.
Kepha abathengisi abazenzi lezi zinqumo bengaboni, futhi yingakho kufanele ukwazi ukusebenzisa izinkomba zobuchwepheshe ukunquma ukunyakaza kwentengo okukhona kwe-Ethereum.
Ngakho-ke, uma unentshisekelo yokuthengisa okufishane i-Ethereum, kufanele uqinisekise ukuthi umthengisi wakho uyakuvumela ukuthi wenze lokho. Lokhu kungenxa yokuthi akubona bonke abathengisi abanezindawo ezithengisa isikhashana ongazisebenzisa ukuhweba i-Ethereum. Kuyathakazelisa ukuthi bonke abathengisi esibahlaziye kulo mhlahlandlela bazokuvumela ukuthi ufushane ukuthengisa i-Ethereum ngokusebenzisa izinsimbi ze-CFD.
Ngamazwi alula, ukuhweba ngamakhophi kwenza khona kanye lokho okucabangayo. Isici sikuvumela ukuthi ukopishe ukuhweba kwabanye abantu abasebenzisa i-Ethereum broker ngokwabo. Lokhu kusho ukuthi ungasebenzisa ubuchwepheshe bomunye umhwebi ukwenza inzuzo ku-Ethereum. Lokho wukuthi, uma usukhombe umhwebi wakho omfunayo, uyalela umthengisi ukuthi akopishe izikhundla zabo ezivulekile ngokuzenzakalela.
Ngokuphawulekayo, noma kunjalo, ngaphambi kokukhetha umthengisi wakho we-Ethereum oyifunayo, kuzodingeka unqume isigxobo sakho. Ngokuya kumthengisi omsebenzisayo, uzoba nenani eliphansi ongalidayisa kulesi simo. Ku-eToro, ubuncane ongababeka ngemuva komthengisi okopishiwe ngu- $ 500. Uma usuqinisekisile ukuhweba, umthengisi uzodonsa imali kubhalansi ye-akhawunti yakho.
Masikubeke konke lokhu kumongo:
Ake sithi umhwebi we-Ethereum ohlose ukumkopisha ufake imali engu- $ 10,000 efeni.
Lokhu akusho ukuthi nawe kufanele ubeke u- $ 10,000 ku-Ethereum. Isigxobo sakho singaba yinoma yiliphi inani olifisayo.
Empeleni, ngokuhweba ngamakhophi, inhlokodolobha akuyona into ebalulekile, kepha isisindo. Ngakho-ke, noma yini umhwebi okopishiwe akwenzayo ngesikhundla sakhe kuzoba nomthelela olinganayo nakuphothifoliyo yakho.
Lokho wukuthi, uma benquma ukuthengisa nokuvala isikhundla sabo, kuzokwenzeka okufanayo kuphothifoliyo yakho.
Isibonelo, uma utshale imali engu- $ 500 ekuhwebeni futhi babeka engcupheni u-5% wephothifoliyo yabo ku-Ethereum no-10% ku-Bitcoin, uzothenga ngokuzenzakalela u- $ 25 we-ETH kanye no- $ 50 we-BTC.
Ngakho-ke, njengoba ubona, uhweba ngobuchwepheshe ngesipiliyoni selinye iqembu elikopishiwe. Ngakho-ke, uma usaqala ofuna ukuqala ukuhweba i-Ethereum ngaphandle kokulibala, ungahle uthande ukubheka ukuthi umthengisi omkhethayo unikeza leli thuluzi. Umhlinzeki onjengo-eToro wenza, okungesinye isizathu esenza ukuthi kube ngomunye wabathengisi abahamba phambili be-Ethereum emakethe namuhla.
Umthengisi onomklamo osebenziseka kalula wenza kube lula ukuhweba nge-Ethereum. Abantu abaningi bacabanga ukuthi ukuhweba nge-cryptocurrency kuyinkimbinkimbi, ngoba izinombolo, amashadi nezinye izinto ezifanayo kuyabandakanyeka. Kungakho abathengisi abahamba phambili baklanywa nge-interface yomsebenzisi elula evumela abaqalayo nabahwebi abanolwazi ukuthi babe nokuhlangenwe nakho okubushelelezi.
Ngakho-ke, kubalulekile ukukhetha umthengisi owenzelwe ngokucophelela ukuze uvikele amaphutha angenasidingo. Into yokugcina oyifunayo ngenkathi uhweba i-Ethereum ukufaka ngephutha isigxobo esingalungile noma wenze ukuhweba osenquma ngakho. Amaphutha alolu hlobo angagwenywa lapho usebenzisa i-broker efana ne-eToro - eza nesixhumi esibonakalayo esilula eceleni kwemiyalo lapho ufaka ama-oda akho.
Abathengisi abahamba phambili be-Ethereum banikela ngokusekelwa okuhle kwamakhasimende. Lokhu kubalulekile ukuze uthole usizo lapho udinga izimpendulo zombuzo noma ukukhathazeka. Isibonelo, uma i-akhawunti yakho iba nenkinga ngokungazelelwe futhi unethuba elingase libe khona lemakethe ongafuni ukuliphuthelwa, uzodinga impendulo esheshayo ekusekelweni kwamakhasimende.
Ngakho-ke, ukucatshangelwa okubalulekile lapho kuhlolwa ukwesekwa kwamakhasimende komthengisi kufanele kufaka phakathi ukuthi kunenketho yengxoxo ebukhoma.
Le yindlela esheshayo yokuxhumana nethimba lezinsizakalo zamakhasimende futhi umthengisi onjengo-eToro unikela ngale ndlela.
Ngokwengeziwe, ungacabanga nokuthi ngabe kukhona ukuhlinzekelwa ngokuxhaswa kwe-imeyili nocingo.
Ngokufanayo, abathengisi abahamba phambili be-Ethereum bazoba nesigaba se-FAQ, lapho imibuzo eyisisekelo ephathelene nepulatifomu ibizophendulwa khona.
Ekugcineni, hlola amahora okutholakala kosizo lwamakhasimende. Ngokuncanyelwayo, khetha umthengisi otholakala 24/7. Noma kunjalo, ungakhetha futhi umthengisi otholakala ngo-24/5.
Yize kufanele ufundiswe ngokwanele nge-Ethereum ngaphambi kokuba uqale ukuhweba, uma kukhulunywa nge-cryptocurrency, ukufunda kuyaqhubeka. Ngakho-ke, kufanele ucabangele ukuthi ngabe umthengisi unikela yini ekuqondeni kwakho ukuhweba nge-Ethereum.
Abathengisi abahamba phambili be-Ethereum - njenge-eToro, bakunikeza imihlahlandlela, amashadi, nokuphakelwa kwezindaba, lapho ungazifundisa khona futhi uhlale unolwazi ngamathrendi emakethe. I-eToro futhi inengxenye yocwaningo enikezelwe ku-Ethereum, lapho ungathola khona ukuqonda okuningi emakethe ye-cryptocurrency.
Njengoba umsebenzi wakho njengomhwebi wase-Ethereum ukuqagela izimakethe, umthengisi okukunikeza ukufinyelela ezintweni zokufunda uzokwenza uhambo lwakho lube bushelelezi. Lokhu kungenxa yokuthi, ezimweni eziningi, unakho konke okudingayo ukuhweba ngeplatform eyodwa.
Njengokuqala, kufanele uthathe zonke izinyathelo ezidingekayo ukunciphisa izingcuphe lapho uhweba i-Ethereum. Ngenkathi abatshalizimali abanolwazi bengahamba ngokushesha okukhulu ngenkathi behweba, ama-newbies kudingeka aqaphele. Enye yezindlela eziphumelela kakhulu zokwenza lokhu ukuqala uhambo lwakho lokuhweba nge-Ethereum nge demo i-akhawunti.
I-akhawunti yedemo ikuvumela ukuthi uhwebe ngaphandle kwengozi futhi ngaphandle kwemali yangempela. Ukubaluleka kokuqala nge-akhawunti enjalo ukujwayelana nezinqubo ezithintekayo ekuhwebeni i-Ethereum. Ngakho-ke, empeleni, kubonakala sengathi usezimakethe zangempela, kepha awukho. Umane ufunda futhi ujwayela umhlaba we-crypto.
Ukuhweba i-Ethereum kulula kakhulu lapho ungafinyelela i-akhawunti yakho ngenkathi usohambeni. Lezi zinhlelo zokusebenza zakhiwe ukuze ukwazi ukufinyelela emakethe ye-idijithali yemali ngaso sonke isikhathi futhi kalula.
Ngakho-ke, uma ubheka ukuhweba i-Ethereum ngokusemandleni ngangokunokwenzeka, noma ngabe umthengisi unohlelo lokusebenza lweselula kungaba enye yezinto okufanele uzicabangele. I-eToro, i-Capital.com, ne-AvaTrade konke kunezinhlelo zokusebenza zeselula ezihambisana namadivayisi we-iOS ne-Android.
Ungaqala Kanjani Kubathengisi Abakhulu be-Ethereum - Ukuhamba Okuningiliziwe
Manje njengoba usufunde ngabathengisi abahamba phambili be-Ethereum namamethrikhi okufanele uwasebenzise lapho wenza ukukhetha, into elandelayo ongathanda ukuyazi ukuthi ungaqala kanjani. Le nqubo icishe ifane kubo bonke abathengisi esibabuyekezile. Ngakho-ke, ngokuhamba esixoxa ngakho kulesi sigaba, ungavula i-akhawunti yakho kumthengisi wakho we-Ethereum oyifunayo ngaphansi kwemizuzu emihlanu!
Isinyathelo 1: Vula i-Akhawunti Yokuhweba
Ngaphambi kokuba uqale ukuhweba i-Ethereum, uzodinga ukudala i-akhawunti nomthengisi omkhethile. Lapha, uzodinga ukwenza inqubo Yazi Ikhasimende Lakho (KYC) uma usebenzisa ifayela le- ilawulwa ipulatifomu yokuhweba - okufanele ube yikho.
Kwi-eToro, kufanele unikeze imininingwane yomuntu siqu, i-ID ekhishwe uhulumeni, nesitatimende sasebhange / isikweletu sosizo. Lokhu kuzosetshenziselwa ukuqinisekisa ubunikazi bakho nokuqinisekisa ikheli lakho lasekhaya.
Isinyathelo 2: Yenza Idiphozithi ku-Akhawunti Yakho
I-akhawunti engenalutho ayisizi kuwe uma ufuna ukuhweba i-Ethereum futhi wenze inzuzo yangempela. Ngakho-ke, kufanele uxhase i-akhawunti yakho usebenzisa noma yiziphi izindlela zokukhokha ezisekelwayo. Lezi zindlela ngokuvamile zifaka amakhadi wedebithi / wesikweletu, ama-e-wallets, nokudluliswa kocingo.
Mane ubeke okungenani inani eliphansi elidingekayo futhi uqinisekise ukuthi isibalo sisuselwa kuzinhloso zakho zebhajethi nokuhweba. Nge-eToro, kudingeka ukuthi ukhokhele i-akhawunti yakho ngediphozithi ephansi yama- $ 200 ($ 50 wamakhasimende ase-US).
Isinyathelo 3: Khetha i-Ethereum Pair
Thola ibhokisi lokusesha bese ufaka u-'Ethereum 'kulo. Lapho usuthungatha ithokheni, isistimu izokhombisa ukubhangqa, ngemuva kwalokho kufanele uyikhethe.
Isinyathelo 4: Vula Isikhundla Sakho
Ngemuva kokufika ekhasini lokuhweba le-Ethereum, uzokwazi ukunquma ama-oda ongena ngawo emakethe. Khetha i-oda, liqinisekise, futhi umthengisi uzokwenza ukuhweba kwakho ngokushesha. Yilokho kuphela!
Ama-Ethereum Brokers ahamba phambili - Ngezansi
Ukwazi abathengisi abahle kakhulu be-Ethereum kuyisinyathelo esibalulekile ohambweni lwakho lokuhweba ngale cryptocurrency eyaziwayo. Abathengisi abahamba phambili ngokuhweba i-Ethereum bonga imali, balawulwa, futhi kulula ukuyisebenzisa.
Lapho ukhetha umthengisi onalezi zici nazo zonke lezo okuxoxwe ngazo kulo mhlahlandlela, usethwe ukuthi ube nokuhlangenwe nakho okungenamthungo kokuhweba i-Ethereum. I-eToro ingumthengisi ebeka uphawu kuwo wonke lawa mabhokisi - njengoba ipulatifomu ilawulwa, inikela ngemali ephansi, futhi ikuvumela ukuthi uhwebe i-Ethereum kusuka ku- $ 25 nje.
Yibaphi abathengisi abahamba phambili be-Ethereum?
Yize kunabathengi abaningi ongabathengisela i-Ethereum, ukugxila kwakho kufanele kube kukhetho olungcono kakhulu wena. Ukukhetha kubathengisi abahamba phambili be-Ethereum ukuthi ungaba kanjani nesipiliyoni sokuhweba esingenamthungo. Ngokwengeziwe, kubathengisi abaphezulu abanjengo-eToro, ungathengisa i-Ethereum ngesisekelo sokusabalala kuphela. Abanye abadayisi ababiza imali okufanele ubacabangele kufaka phakathi iCapital.com ne-AvaTrade.
Uhweba kanjani u-Ethereum?
Qala ngokuvula i-akhawunti yokuhweba nomthengisi olawulwayo njenge-eToro. Ukulandela lokho, yenza idiphozi ku-akhawunti yakho bese usesha i-ETH / USD. Faka isigxobo sakho, faka i-oda, bese uvula ukuhweba kwakho.
Ungakwazi yini ukuhweba nge-Ethereum ngesilinganiso?
Ukuphela kokufanele ukwenze ukukhetha umthengisi we-Ethereum okuvumela ukuthi uhwebe ama-CFD ahlonyisiwe. Ungakhetha i-Capital.com ngale njongo. I-eToro ne-AvaTrade futhi ikuvumela ukuthi uhwebe i-ETH ngamandla. Khumbula nje - ezinye izifunda - njenge-US ne-UK, azivumeli okuphuma ku-leveraged crypto.
Ngingayenza kanjani imali ngokuhweba kwe-Ethereum?
Ukwenza imali ngokuhweba kwakho kwe-Ethereum kusebenza ngendlela efanayo nanoma yisiphi esinye isigaba sefa. Umane nje udinga ukuqonda amasu amahle kakhulu wokukwenza. Ngakho-ke, maqondana nokuhweba kwe-Ethereum, kufanele ufunde amasu asebenzayo azothuthukisa ukubuya okuhle.
Ngokwengeziwe, kufanele ukhethe umthengisi we-Ethereum ongabizi kakhulu njenge-eToro - lapho ungathengisa khona i-crypto ngokusabalalisa kuphela. Abathengisi abahamba phambili be-Ethereum bazokunikeza nezinto zokufunda ezizothuthukisa ulwazi lwakho lokuhweba nokusebenza kahle.
Yini inkomba yezobuchwepheshe ehamba phambili yokuhweba i-Ethereum?
Kunezinkomba eziningi zobuchwepheshe emakethe. Okunye okuhle kakhulu ongakusebenzisa ukuthola ukuqonda ku-Ethereum kufaka phakathi inkomba ye-RSI, inkomba ye-OBV, iMoving Average Convergence / Divergence (MACD), nokuningi.